Diode Laser Machine | China Diode Laser Machine mpanamboatra sy mpamatsy
808nm diode laser soprano laser volo fanesorana volo vidin'ny orinasa
Teôria fitsaboana. Ny diode laser dia mamakivaky ny hoditry ny hoditra mba hahatratra ny fakan'ny folikelin'ny volo, azo sintomina izy io ary manimba ny tavy follicle volo, ka esorina ny volo nefa tsy misy ratra manodidina ny sela. Diode laser dia mandaitra kokoa ary tsy misy fanaintainana amin'ny fanesorana volo noho ny laser hafa. Fampiharana. Esory maharitra ny volo tarehy, volo amin'ny vatana, volo amin'ny armpit, volo an'ny tongotra aman-tanana ary volo tsy ilaina amin'ny faritra rehetra amin'ny vatana. Mety amin'ny karazana hoditra sy volo rehetra izy io. Famaritana laser laser diode karazana ...
Hery lehibe 1500W milina lehibe habe Diode Laser fanesorana volo
Product famaritana teôria miasa laser 808nm diodo: teknolojia fanesorana volo laser 808 Diode dia mifototra amin'ny dinamika amin'ny hafanana sy ny hafanana. Ny laser dia mamakivaky ny hoditry ny hoditra hahatratra ny fakan'ny folikelin'ny volo. Ny hazavana dia azo tsentsina ary avadika ho vatan-doha foliky ny volo, hany ka mihena indray ny volo tsy misy ratra manodidina ny sela. Ny bara laser fanesorana volo laser 808nm dia nohafarana avy any Alemana Jenoptik orinasa, kalitao tena tsara ...
Fanesorana volo laser amin'ny teknolojia vaovao miaraka amin'ny teknolojia fibre tsy misy fampiasa azo ampiasaina amin'ny masinina laser 808nm Optical
Endri-javatra vokatra 1. Ity fitaovana ity dia fitaovana fitsaboana amin'ny laser maoderina. Izy io dia voasokajy ao amin'ny Kilasy Ⅲ any Shina, Amerika ary Kanada ary ny Class IIb ao amin'ny EU araky ny fitsipika mifandraika amin'izany 2. Amin'ny alàlan'ny fitsipi-pifanarahana mifototra amin'ny fiarovana ny fitaovam-pitsaboana, ity milina ity dia an'ny fitaovana I sy ireo fitaovana mahazatra azo ovaina. 3. Fiarovana tsara amin'ny ranoka manimba. fitaovana ity mahazatra ity milina ity. Product famaritana Light Source Fibre laser halavan'ny 808nm ...
Ny vidiny tsara indrindra 755 + 808 + 1064 diode laser fanesorana volo ho an'ny salon
Ahoana ny fiasan'ny Laser 808 Diode? AlexMED, voaporofo ara-pitsaboana fa afaka manala volo azo antoka sy mahomby amin'ny karazan-koditra sy volo rehetra, no lasopy laser diode haingana indrindra an'ny LaserTell. Izy io dia tanterahina amin'ny alàlan'ny teknolojia laser 808nm diode volamena mahazatra, miaraka amin'ny angovo miditra lalina ao anaty dermis miaraka amin'ny herin'ny salan'isa avo lenta ary ny taham-pahavoazana 10 pulse isan-tsegondra haingana mba hanafanana ny volo volo sy ny volon'ny taovolo, fa tsy handrava ny fikambanana ôksizenina manodidina ny volo follicle. Mandritra izany fotoana izany, mifandray amin'ny surfac ...
980nm diode laser spider vein machine dia ny tsindrona optimum optimum an'ny sela porphyrin. Ny sela sela dia mitroka ny laser highenergy an'ny halavan'ny 980nm, mitranga ny fanamafisana ary tapaka tanteraka. Raha ampitahaina amin'ny fomba nentim-paharazana, ny laser 980nm diode dia afaka mampihena ny mena, ny fandoroana ny hoditra. Izy io koa dia manana vintana kely kokoa amin'ny fampitahorana. Mba hahatratrarana tsara kokoa ny tavy kendrena, ny angovo laser dia atolotry ny tànana famolavolana matihanina. Manampy amin'ny taratra infrared 635nm, It ...
1.360 ° Screen Screen Touch azo ovaina miaraka amin'ny LED mahatalanjona manodidina. 2. AlexMED ihany no miaraka amin'ny Casters / Rollers eo anelanelan'ny endrika ambony latabatra Diode ambony latabatra voalohany miaraka amin'ny Casters / Rollers ho an'ny Lady's Easier Moving. 3.Trio Clustered 755 + 808 + 1064nm miaraka amin'ny fandrakofana avo indrindra. 4.Miorina manan-tsaina indrindra miaraka amin'ny Trio Clustered Diode. AZO ATAO NY Drafitra mahery sy marani-tsaina azo jerena AMIN'NY TODO CLUSTERED DIODE! Inona ny maha samy hafa ny 3 halavan'ny 755nm 808nm 1064nm 755nm Wavelength TheAlexandrite halavan'ny ma ...
Vokatra asongadina, Sitemap, Laser Module 808, Esory ny fanesorana volo amin'ny Shr Ipl, 3 amin'ny 1 Ipl, Jiro Flash Ipl Xenon, Diode fanesorana volo laser amin'ny trano, Laser Epilator Ipl, Vokatra rehetra Room 308, No.12, Jingsheng South 2nd Road, Distrikan'i Tongzhou, Beijing, Sina